INDLU KAPOGGIO BARONE BOUGANVILLEA
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMarcella
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMarcella iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu encinci kwinduli ejikelezwe yiminquma kunye nemithi yesitrasi. Ukuntywila kumaphandle aqhelekileyo aseSicilian kunye nepanorama entle eqala kuLwandle lwaseTyrrhenian ukuya e-Etna (ngamanye amaxesha iqhuma).
Inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nefriji-ifriji, i-dishwasher, i-oveni, i-toaster, umenzi wekofu, iketile yombane.
Umoya womoya kunye neWiFi yasimahla, iTV yescreen esicaba. Inegumbi lokuhlamba impahla kunye nethafa elangeni.
Iivenkile ezinkulu ezifikeleleka lula, iindawo zokutyela kunye neemarike zeveki.
Ifumaneka eRodì, inegadi yabucala ene-pergola, indawo yokuqubha engaphandle exhotyisiweyo kunye neembono zolwandle. Ixhotyiswe ngamagumbi amabini okulala kunye nebhedi zabantwana ezimbini, igumbi lokuhlambela eli-1 elinesomisi enwele
Ikhaya likaMarcella liseRodì, eSicily, eItali.
Kufuphi uyakwazi ukungcamla ipizza egqwesileyo, izitya zentlanzi ezitsha kunye nezimuncumuncu zeSicilian eziqhelekileyo (i-ayisikrimu, igranita, ialmond kunye nehazelnut paste biscuits, ricotta cannoli, Bronte pistachio desserts).
Siya kuzama ukunika iindwendwe uncedo olulumkileyo noluqhubekayo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rodì